रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका-१ दुरागाउँकी २६ वर्षीया सरिता दर्जीको गालामा पन्यू | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका-१ दुरागाउँकी २६ वर्षीया सरिता दर्जीको गालामा पन्यू
बोक्सी भगाउन तातो पन्यूले बिरामीको गाला डामियो
प्रकाशित मिति ७ असार २०७५, बिहीबार २१:२९ लेखक नेपाली जनता
रामेछाप । बाेक्सीकाे अाराेपमा रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका-१ दुरागाउँकी २६ वर्षीया सरिता दर्जीको गालामा पन्यूले डामिएको छ । डामिएको घाउ निको पार्न उनी स्वास्थ्य चौकीको सहारामा पुगेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।
दर्जीलाइ पेटसम्बन्धी रोग थियो । उनी धामी लगाउन चाहन्थिन । छिमेकी जिल्ला ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिकाका रवीन्द्र नेवारले राम्रो धामी बस्ने भन्दै स्थानीयले सुझाव दिए । उसैलाई बोलाएर देखाउने सहमति भयो ।
नेवार बोलाएपछि स्थानीय केही युवा पनि दर्जीको घरमा पुगे । उनीहरुले दर्जीलाई बोक्सी लागेको भन्दै बोक्सी भगाउन सिस्नु पानी लगाउनुका साथै फलामको पन्यू तताएर गाला डाम्नु पर्ने सुझाव दिए । धामी बसेका नेवारले सिस्नु पानी लगाउँदै दर्जीलाई कुट्न थाले । फलामको पन्यु तताउन लगाएरबेस्सरी गालामा डामे । त्यसको पीडा खप्न नसकेर दर्जी बेहोस भइन् धामी नेवार भागे । यो घटना जेठ २४ गते भएकाे हाे ।
केही घण्टामा होसमा आए पनि अब बोक्सी भाग्ने भन्दै पीडा सहेर बसेकी दर्जीलाई दुवै रोगले च्याप्यो । ‘मलाई एकातिर पेट दुख्ने त छँदैथियो, गाला डामेको पीडा थपियो’ दर्जीले भनिन्, ‘जेठ २४ गते भएको घटनाको पीडा खप्न नसकेर असार ४ गते स्वास्थ्य चौकीमा पुगेँ, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले सोधखोज गरेपछि बल्ल म अन्यायमा परेको कुरा सार्वजनिक भयो ।’
स्वास्थ्यकर्मीले बोक्सी नभएको र पन्यूले गालामा डाम्नेलाई कानुनी कारबाही हुने बताएर दर्जीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धोवीमा पठाइदिए । धोवी इलाकाले ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मन्थलीमा पठायो । मन्थली पुगेपछि दर्जीले तातो पन्यूले डाम्ने र त्यस कार्यमा सहयोग गर्नेको नाममा किटानी जाहेरी दिइन् । उनको जाहेरीका अधारमा प्रहरीले धामीलाई सघाउने ३ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । आफूलाई धामी भन्ने नेवार फरार छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका अनुसार पक्राउ पर्नेमा रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका-१ बस्ने राजन पौडेल, दीपक ढटेल र अश्विन रोका छन् । उनीहरुलाई जिल्ला अदालतबाट बोक्सी ऐन बमोजिम १० दिनको म्याद थप गराइ अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ । फरार रहेका नेवारको खोजी भइरहेको प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रकुमार थापाले बताए ।
बोक्सी ऐन २०७२ अनुसार पीडा दिने पिडकलाई ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म जेल सजाय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
नेविसंघभित्र विवाद: पौडेल पक्षले समानान्तर समिति बनाउने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सशक्त भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ यतिखेर केन्द्रीय समितिविहीन अवस्थामा छ ।
पटक पटक म्याद…
सरकारलाई सुरक्षा थ्रेट दिँदै पण्डित
काठमाडौं । नेपालमा केही यस्ता व्यापारीहरु छन्, जसले देशका नीति नियमलाई पैसाले किनेका छन् । तिनैमध्ये एक हुन्, मेडिकल…
आज हुरीबतास र मेघ गर्जनसहित पानी पर्छ– मौसमविद
काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका विभिन्न भूभागहरुमा शुक्रबारको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जनाएको छ ।
अमेजनका मालिक बेजोस इतिहासकै सर्वाधिक धनी !
काठमाडौं । जेफ बेजोसले इतिहासकै धनीको उपमा पाएका छन् । गत…
विद्यार्थीलाई कोठाको पढाइले मात्र पुग्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कक्षा कोठाको पढाइबाट मात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने बताएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको…
संबैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खुल्यो, कार्यान्वयन कहिले ?
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेसँगै संबैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। लामो समयदेखि नियमावली बन्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको…
को–कोलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा अख्तियार अलमलम
बाल्टिनमा डुबेर मृत्यु
“माइतीघर मण्डलामा दुःख नगरे हुन्छ”
घुस लिएको अभियोगमा प्रहरी पक्राउ
गाउँपालिका कार्यालयमा आगजनी र बम फेला
चन्द समूहका सिन्धुपाल्चोक सेक्रेटरी पक्राउ
सांसद मनाङ्गेले गरे एन्फा कास्कीका अध्यक्षमाथि कुटपिट
मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा ६ को मृत्यु, ५ जना गम्भीर घाइते
साढे २ हजार नेपाली सेना माग
रङ्गशालाका लागि महायज्ञबाट ५० करोड सङ्कलन गरिँदै
दोर्दीखोलाको सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यमा व्यस्त मजदुर ( फाेटाे )
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : आजराति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) 17 views
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति 14 views
नियमित सेक्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? जान्नुहोस् यो रोचक कारण 8 views
कुखुराको भाले बोकेर सुत्केरी भेट्न पुगे वडाध्यक्ष 8 views
विजाड फ्रेगनेन्सको शुद्धप्लस नामक गुटखा मापदण्डविपरीत बिक्री वितरण7views
नेपालका लागि नयाँ भारतीय राजदूतमा विनयमोहन7views
मन्त्री ताक्दै एमालेका बदनामहरू, कसले कुन मन्त्रालय ताके ?7views
नेपाल ट्रस्टको कार्यालय भाडामा दिँदा ५ अर्बको अनियमितता7views
नफेरिने भो कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम7views